Indlu yasemaphandleni enamagumbi okulala ama-3 eNava, eAsturias.
Monga, Principado de Asturias, Spain
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSeve
I-94% yeendwendwe zakutshanje inike uSeve iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu yasemaphandleni enemigangatho emibini kwibhunga laseNava, e-Asturias, enefama enomhlaba. Indlu ixhotyiswe kakuhle kakhulu kwaye inokufikelela kwiWiFi. Yindawo ezolileyo enezithuthi ezincinci kwaye kude neendlela. Ilungele kakhulu izilwanyana zasekhaya.
Indlu yasemaphandleni enemigangatho emibini kumasipala waseNava, e-Asturias, enegadi. Ipropathi ixhotyiswe kakuhle kakhulu kwaye inokufikelela kwi-WiFi. Le yindawo ezolileyo enezithuthi ezincinci kwaye ikude kwiindlela. Ilungele kakhulu izilwanyana zasekhaya.
Umgangatho ophantsi uneholo, indawo ebanzi ye-41 m2 igumbi lokuhlala-ikhitshi elinendawo yomlilo kunye nendlu yangasese apho umatshini wokuhlamba ukhoyo. Umgangatho ophezulu unegumbi lokuhlambela eliqhelekileyo elinebhafu enkulu. Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi ephindwe kabini linokufikelela ngasese kwigumbi lokuhlambela elineshawa kunye nescreen. Igumbi lesibini linebhedi ezimbini zomntu omnye kwaye elesithathu linebhedi enye.
Umgangatho ophantsi unomnyango, indawo evulekileyo ye-41 m2 Igumbi lokuhlala-ikhitshi-igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye negumbi lokuhlamba elinomatshini wokuhlamba. Umgangatho ophezulu unendlu yangasese eqhelekileyo kunye nebhafu enkulu. Igumbi lokulala eliphambili elinebhedi ephindwe kabini linokufikelela kwindlu yangasese yangasese eneshawari evaliweyo. Igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini zomntu omnye kwaye eyesithathu ibhedi enye.
Le ndlu ikwisiza esahlukileyo ngeendlela zasekuhlaleni ezigangathiweyo. Ineveranda enefenitshala, ngaphezulu kwe-50 m2 yendledlana yeenyawo kunye nendawo yokupaka eyi-40 m2 enokungena kwizithuthi ezimbini. Igadi yangaphandle inommandla oluhlaza ongaphezulu kwe-400 m2. Le yindawo yasemaphandleni ezolileyo kodwa isondele kakhulu kuzo zonke iinkonzo zedolophu yaseNava. Ineembono ezintle zikaSodolophu wePeña kunye neendlela ezininzi zasekhaya zokuhamba izilwanyana.
Indlu ibekwe kwindawo evaliweyo ejikelezwe ziindlela zetarmac zasekhaya. Ineveranda enefenitshala, ngaphezulu kwe-50 m2 yendlela yeenyawo, kunye nendawo yokupaka ii-40 m2 enokwaba iimoto ezimbini. Igadi yangaphandle inommandla oluhlaza ongaphezulu kwama-400 m2.
Le yindawo yasemaphandleni ezolileyo kodwa isondele kakhulu kuzo zonke iinkonzo zelali yaseNava. Ineembono ezintle kakhulu zikaSodolophu wasePeña kunye neendlela ezininzi zasekhaya zokuhamba izilwanyana.
Umbuki zindwendwe ngu- Seve
Umnini wepropati uya kufumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku ukusombulula nayiphi na imibuzo okanye iingxaki ngexesha lokuhlala kweendwendwe.
Umnini uya kufumaneka i-24 h ngosuku ukusombulula nayiphi na intandabuzo okanye ingxaki ngexesha lokuhlala kwemikhosi.
Inombolo yomthetho: CA.1587.AS